ကီတိုမြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
အပေါ်ဘယ်:ဂါစီရာမိုရီနိုလမ်းနှင့် ပန်နီစီလို တောင်တန်းများ၊ အပေါ်ညာ: ကိုတိုကိုလောင်ဒေသမှ မြင်တွေ့ရသော ကရန်ဘီမီးတောင်၊ အောက်ဘယ်:ကွီတိုမြို့ မြင်ကွင်းကျယ်၊ အောက်ဘယ်အပေါ်:The Basilica of National Vow Church ၏ ညမြင်ကွင်း၊ အောက်ညာဘက်:ကွီတိုကက်သီဒရယ်နှင့် အယ်လ်တီဂျာ ရှေးဟောင်းဧရိယာ
နာမည်ပြောင်(များ): Luz de América (အမေရိက၏ အလင်းရောင်)၊ Carita de Dios (ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာတော်)၊ Ciudad de los Cielos (နတ်ဘုံမြို့)
ကိုဩဒိနိတ်: 00°14′S 78°31′W﻿ / ﻿0.233°S 78.517°W﻿ / -0.233; -78.517ကိုဩဒိနိတ်: 00°14′S 78°31′W﻿ / ﻿0.233°S 78.517°W﻿ / -0.233; -78.517
ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၁၅၃၄
၃၇၂.၃၉ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၄၃.၇၈ စတုရန်းမိုင်)
၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၀ စတုရန်းမိုင်)
၄၂၁၇.၉၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၆၂၈.၅၆ စတုရန်းမိုင်)
၂၈၅၀ မီတာ (၉၃၅၀ ပေ)
၇၂၀၀/km၂ (၁၉၀၀၀/sq mi)
၁၁၀၀/km၂ (၂၉၀၀/sq mi)
EC1701 (အသစ်), P01 (ပုံစံအဟောင်း)
တည်ရှိသည့် နိုင်ငံ အီကွေဒေါ
ရွေးချယ်သည့်စံနှုန်း ii, iv
ဒေသ** လက်တင် အမေရိကား နှင့် ကာရစ်ဘီယံ
စတင်သတ်မှတ်ခြင်း ၁၉၇၈ (ဒုတိယအကြိမ်)
အယ်လ်ပန်နီစီလိုမှ မြင်ရသော ကီတိုမြို့
ကီတိုမြို့သည် အီကွေဒေါနိုင်ငံ၏ မြို့တော် နှင့် အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက် ၉,၃၅၀ပေ (၂,၈၅၀ မီတာ) အမြင့် တွင် တည်ရှိကာ အီကွေတာနှင့် နီးစပ်စွာတည်ရှိသော ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ လာပတ်ဇ်မြို့ ပြီးလျှင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယမြောက် အမြင့်ဆုံးနေရာ၌ တည်ရှိသော မြို့တော် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ဂွယ်လာဘမ်ဘာမြစ်ဝှမ်းတွင် တည်ရှိပြီး အင်န်ဒီးစ် တောင်တန်းများရှိ စထရာတိုမီးတောင်ရှင် တစ်ခု ဖြစ်သော ပီချင်ချာ မီးတောင်၏ အရှေ့ဘက် ကုန်းစောင်းတွင် တည်ရှိသည်။တမ်းပလိတ်:Vn
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မြို့တော်အား တောင်အမေရိကနိုင်ငံများ သမဂ္ဂ၏ ရုံးချုပ် အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
ကီတိုသမိုင်းဝင်ဌာနသည် အမေရိကားတိုက်ရှိ အကြီးမားဆုံး၊ ပြုပြင်မှု အနည်းဆုံး နှင့် အကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်းထားသော ဌာန တစ်ခု ဖြစ်သည်။  ကီတိုမြို့ နှင့် ခရာကောင်းမြို့ဟောင်း တို့သည် ယူနက်စကိုမှ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး ကြေညာခဲ့သော ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ များတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ကီတိုမြို့၏ ဗဟိုရင်ပြင်သည် အီကွေတာ၏ တောင်ဘက် ၁၆မိုင် (၂၅ ကီလိုမီတာ) အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ မြို့တော်သည် လတ္တီကျု သုညဒီဂရီမှ ၀.၆၂မိုင် (၁ ကီလိုမီတာ) အတွင်း ဖြန့်ကျက် တည်ရှိသည်။ အီကွေတာပေါ်တွင် ရှိသော အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦး နှင့် ပြတိုက်အား လာမီတက်ဒယ်လ်မွန်ဒို (ကမ္ဘာ၏ အလယ်ခေါင်) ဟု ဒေသတွင်း ခေါ်ဝေါ်ကြပြီး အီကွေဒေါ ဟူသော အမည်မှာ စပိန်ဘာသာဖြင့် အီကွေတာဟု အမည်ရသဖြင့် ရှုပ်ထွေးမှု မဖြစ်အောင် ခွဲခြားထားခြင်း ဖြစ်သည်။ 
↑ Contacto (in es)။ Petroecuador။7February 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 May 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Security Watch: South American unity" . International Relations and Security Network. Retrieved on August 1, 2008.
↑ ၄.၀ ၄.၁ City of Quito – UNESCO World Heritage။ Whc.unesco.org။ 2010-04-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ How to Get to the Equatorial Monument (La Mitad Del Mundo)။ USA Today။ 29 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကီတိုမြို့&oldid=705635" မှ ရယူရန်